Gbasara Anyị - Yiwei
.Lọ > Gbasara Anyị >
Dongguan Yiwei nkenke Hardware Co., Ltd. e guzobere na 2010. Ebe ọ bụ na ya oruru, anyị mgbe niile ahịa-centric, n'ịgbaso niile na-eme, na n'ụzọ zuru ezu na-eju afọ ahịa mkpa.Site anyị na-aga n'ihu mgbalị, anyị kpụrụ a zuru ezu ulo oru yinye si ngwaahịa imewe na mmepe, ngwaahịa mmepụta ka ngwaahịa usoro mma na usoro nke ngwaike zinc-aluminum alloy anwụ-mgbatị, ọla kọpa-aluminom ngwaahịa ibe ya bụrụ, CNC machining, wdg ụlọ ọrụ nwere 5,000 tọn ngwá ọrụ na-arụ ọrụ, tọn 3,000 nke ihe eji arụ ọrụ, tọn 1,250 nke ngwongwo aluminom na-anwụ anwụ, tọn 280 nke ihe ndozi, na 88 nke aluminom alloy ịnwụ. 10 tent nke 850 / 650CNC, 3 tent nke anọ axis machining emmepe, 4 tent nke CNC lathes, 4 tent nke isi igwe, nke nwere ike izute mmepụta na mmepe nke ndị ahịa 'iche iche ngwaahịa; ọ nwere ike izute mmepe chọrọ nke ndị ahịa site na ngwaahịa dị mfe ma dị mgbagwoju anya. Na-etolite ubi, anyị ụlọ ọrụ nwere ike mmepe otu, na-ekwusi ike ogologo oge imekọ ihe ọnụ na miri emi nnyocha na ụlọ ọrụ ndị ọkachamara. Ọ nwere ahụmịhe zuru oke n'ọhịa nke ụgbọ ala ike ọhụrụ na nlekọta ahụike. N'otu oge ahụ, ahaziri ya maka imepụta ọgụgụ isi, ọdịyo na ọdịyo, ike ọkọnọ na mpaghara ndị ọzọ. Nwere ahụmahụ bara ụba na mmepụta ngwaahịa kemịkal. Na-atụ anya iso gị rụọ ọrụ. Ngwa Ngwaahịa: akpakanamde, nkwukọrịta, ọdịyo, ahụike, ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Nwere mmepụta ngwá: ibe ya bụrụ presses, anwụ-mgbatị igwe, CNC, CNC ụgbọala. Nwere ike na-akwado imewe na mmepe nke mbụ ngwaahịa, na-esi ọnwụ na àgwà mbụ, na-ekwe nkwa 100% nnyefe ọnụego